Fanariana simika ho an'ireo mpanolana miverimberina nankatoavina tany Pakistan
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Pakistan Breaking News » Fanariana simika ho an'ireo mpanolana miverimberina nankatoavina tany Pakistan
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • Pakistan Breaking News • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Fanariana simika ho an'ireo mpanolana miverimberina nankatoavina tany Pakistan.
Ny fanitsiana vaovao dia mampiditra ny fanamelohana ho faty na fanamelohana mandra-pahafaty ho an'ny fanolanana andian-jiolahy ary koa ny fanaratsiana simika ho an'ireo miverimberina manao firaisana ara-nofo, miaraka amin'ny faneken'ilay voaheloka.
Latsaky ny 3% amin'ny fanenjehana ara-pananahana na fanolanana any Pakistan no miteraka fanamelohana.
Raha voatendry ho fanasaziana ny fanariana simika, dia “hotanterahina amin'ny alàlan'ny birao ara-pitsaboana efa nampahafantatra izany”, araka ny lalàna vaovao.
Pakistan dia manatevin-daharana an'i Korea Atsimo, Polonina, Repoblika Tseky ary firenena sasany any Etazonia, izay nampidirana ny fanariana simika.
Ny fanitsiana vaovao amin'ny lalàna efa misy, izay mamela ny fanamelohana haingana sy ny sazy henjana kokoa ho an'ireo mpanolana, dia nolanian'ny solombavambahoaka Pakistaney omaly.
Ireo jiolahy voaheloka noho ny fanolanana marobe izao dia mety hiatrika fanariana simika Pakistan satria nanohana tanteraka ny lalàna vaovao natao hampitsaharana ny firongatry ny fandikan-dalàna ara-nofo ny parlemanta ao amin'ny firenena.
Nofaritana tao amin'ilay volavolan-dalàna ny fanaovana “castration chimique” ho toy ny dingana iray ahafahan'ny olona iray tsy afaka manao firaisana ara-nofo mandritra ny fotoana rehetra amin'ny fiainany, araka izay mety ho tapa-kevitry ny fitsarana amin'ny alalan'ny fampiasana zava-mahadomelina.
Mikasa ny hanangana fitsarana manokana manerana ny firenena mba hahazoana antoka fa ny didim-pitsarana amin'ny raharaha fanolanana ara-nofo dia avoaka “haingana, indrindra ao anatin'ny efa-bolana”. Raha voatendry ho fanasaziana ny fanariana simika, dia “hotanterahina amin'ny alàlan'ny birao ara-pitsaboana efa nampahafantatra izany”, araka ny lalàna vaovao.
Mushtaq Ahmed, loholona ao amin'ny antoko Jamaat-i-Islami ara-pivavahana, dia niampanga ny volavolan-dalàna ho tsy silamo. Nanamafy i Ahmed fa tsy misy resaka fanariana simika ao amin'ny lalàna Sharia ary tokony hanantona ampahibemaso ireo mpanolana.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana zava-mahadomelina hampihenana ny libido amin'ireo mpijangajanga miverimberina, Pakistan manatevin-daharana an'i Korea Atsimo, Polonina, Repoblika Tseky ary ny sasany US fanjakana, izay nampidirana castration simika.
Herintaona lasa izay no nametrahan'ny Filoha Pakistaney Arif Alvi io fepetra io ho setrin'ny fitarainan'ny vahoaka noho ny firongatry ny firongatry ny raharaha manerana ny firenena amin'ny raharaha fanolanana misy vehivavy sy ankizy.
Tamin'izany fotoana izany, nolavin'ny Amnesty International ho toy ny fitsaboana “mahery setra, tsy maha-olombelona” ny fanariana simika, nanoro hevitra an'i Islamabad mba hifantoka amin'ny fanavaozana ny rafi-pitsarana “tsy mety” ary hiantohana ny rariny ho an'ilay niharam-boina.
Araka ny filazan'ny ONG ao an-toerana Ady amin'ny fanolanana, latsaky ny 3% amin'ny fanenjehana ara-nofo na fanolanana any Pakistana no miteraka fanamelohana.